Suuqyada iyo Cointop: 2 GUI iyo barnaamijyada CLI si loola socdo Cryptocurrencies | Laga soo bilaabo Linux
Suuqyada iyo Cointop: 2 GUI iyo barnaamijyada CLI si loola socdo Cryptocurrencies
Maanta, waxaan markale galeynaa berrinka Dunida DeFi. Sababtaas awgeed, waxaan ka hadli doonaa 2 mashruuc oo xiiso leh oo aad u faa'iido badan barnaamijyo bilaash ah oo furan.
2 codsi, mid ka mid ah Desktop (GUI) iyo mid ka mid ah Goob -joogga (CLI) waayo, Nidaamka Howlgalka GNU / Linux loo sameeyay kuwa adeegsada dareenka Dunida DeFi, gaar ahaan kuwa maalinba maalinta ka dambaysa ganacsade (way ganacsadaan) kala duwan Criptomonedas ganacsi. Kuwanna waxaa loogu yeeraa "Suuqyada iyo Cointop".
Dash Core Wallet: Rakibidda iyo Adeegsiga Jeebka Dash Iyo Inbadan!
Waxaa xusid mudan, gaar ahaan kuwa Linuxers xiisaynaya ama xiisaynaya Criptomonedas, taasoo haddii ay dhacdo in aanan dareemin ama aan rabin in dib loo eego / lala wadaago qaar ka mid ah qoraaladeennii hore ee la xiriira Dunida DeFi, waxaan uga tagi doonnaa xiriiriyeyaal waxtar leh hoosta:
"Qeybtaan seddexaad, iyo tan hada daabacaadii ugu dambeysay, ee ku saabsan Wallets Cryptocurrency boorsooyinkooda oo ku saabsan Nidaamyada Howlgalka oo bilaash ah oo furan oo ku saleysan GNU / Linux, waxaan inta badan ka hadli doonaa "Dash Core Wallet" Ka dibna, dadka kale qaarkood oo si aad ah loo yaqaan oo ay adeegsadaan dad badan .”Dash Core Wallet: Ku rakibidda iyo adeegsiga Dash Wallet Iyo in ka badan!
"Asal ahaan, "Adamant" waa codsi furan oo furan oo fariin deg deg ah oo ku saleysan tiknoolajiyada xannibaadda, taas oo iyaduna, u adeegta sida boorsada 'Crypto' iyo 'Cryptocurrency Exchange System (Exchange)."
"DeFi waa isbeddel farsamo furan oo furan oo ka dhacaya agagaaraha tiknoolajiyada dhowaan xannibaadda adduunka maaliyadeed, taasina way sii xoogaysanaysaa maalin kasta sababtoo ah kor u kaca Cryptocurrencies, iyo baahida loo qabo nidaamyada lacag-bixinta ee dijitaalka ah iyo macaamillada lacageed ee lagu kalsoonaan karo, dhakhso badan, ammaan ah oo gaar loo leeyahay."
1 Suuqyada iyo Cointop: Crypto ka Desktop iyo Terminal
1.1 Waa maxay Suuqyadu?
1.1.2 Soo dejiso, rakibo, isticmaal iyo shaashadda shaashadda
1.2 Waa maxay Cointop?
1.2.2 Soo dejiso, rakibo, isticmaal iyo shaashadda shaashadda
Suuqyada iyo Cointop: Crypto ka Desktop iyo Terminal
Waa maxay Suuqyadu?
Sida laga soo xigtay degel rasmi ah dalabka, waa:
"Codsi u shaqeeya raad raaca saamiyada, lacagaha iyo kripto."
Sidaa darteed, asal ahaan waxay leedahay astaamaha iyo shaqooyinka soo socda, taas oo u oggolaan doonta qof walba inuu si fudud u daawado xogta maaliyadeed ee lagama maarmaanka ah, si uu ula socdo suuqa oo uusan marnaba u seegin fursad maalgashi:
Si fudud u abuur oo ula soco galka shaqsiyadeed ee waxyaabaha maaliyadeed (saamiyada, badeecadaha iyo tusmooyinka), hantida (lacagaha) iyo hantida loo yaqaan 'crypto currency' (cryptocurrencies) si aad u daawato.
Ula jaanqaadida Linux Smartphones (Librem5, PinePhone)
Ku fur astaan ​​kasta Yahoo Maaliyadda si aad u hesho faahfaahin dheeraad ah.
Dheellitir cusboonaysiinta inta jeer ee walxaha la xiriira faylalka la abuuray.
Habka mugdiga ah ee loogu talagalay muujinta tusmada.
Soo dejiso, rakibo, isticmaal iyo shaashadda shaashadda
Suuqyada waa barnaamij mashruuc ah GOOBTA GNOMESidaa darteed, waxaa marka hore laga heli karaa gudaha Qaabka ".AppImage". Sidaas, jidkiisa Soo dejiso iyo rakibidda waxay la socon laheyd amarka soo socda:
Taas ka dib, si fudud ayaa loo fulin karaa iyada oo loo marayo Liiska Codsiyada oo u qaabee walxaha si loo muujiyo / looga saaro, iyada oo loo marayo si fudud oo toos ah liiska kore.
Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan Suuqyada waad booqan kartaa bogga GitHub.
Waa maxay Cointop?
Sida laga soo xigtay bogga rasmiga ah ee GitHub dalabka, waa:
"Codsi dhakhso leh oo fudud oo is-dhexgal adeegsade isticmaale (CLI) oo loogu talagalay raadinta cryptocurrencies"
Sidaa darteed, asal ahaan waxay leedahay astaamaha soo socda iyo waxqabadka, taas oo fududeyneysa kormeerka suuqa crypto gebi ahaanba khadka tooska ah:
Waxay bixisaa dabagal ku habboon iyo kormeerka tirakoobka cryptocurrency waqtiga dhabta ah.
Waxay leedahay xiriir htop-dhiirigelin saaxiibtinimo leh oo ay la socdaan furayaasha toobiye vim-u waxyoonay.
Marka la eego, "Cointop" Asal ahaan waa qoraal, markii la soo dejiyo oo aan la furin, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad ka maamusho galka (waddada) halka ay ku taal amarka soo socda:
Intaa ka dib, waxaad arki kartaa taada Iskuxirka CLI oo shaqeynaya dhib la’aan.
Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan "Cointop" waad booqan kartaa degel rasmi ah, si gaar ah isaga u gaar ah qaybta dukumiintiga.
Nota: Kiiskeyga daraasad ahaan, tan iyo markii aan Nidaamka hawlgalka isticmaalay, waa MilagrOS (Respin oo ku saleysan MX Linux) kii ugu dambeeyay version deggan 1.6.5 Looma fulinin dhibaatooyin ka yimid Maktabada GLIBC_2.32. Markii la fuliyay, waxay tuurtay qaladka soo socda ee hoos ka muuqda, halka ay version hore 1.5.4 waxay ku orday iyada oo aan wax dhibaato ah.
Ugu dambeyntii, kuwa isticmaala Deegaanka Desktop-ka ee GNOME, qalab loo yaqaan Qiimo jaban, waxay noqon kartaa beddel kale oo aad u fiican kormeer suuqa crypto.
Waxaan rajeyneynaa tan "waxtar yar post" ku saabsan «Markets y Cointop», 2 xiiso leh oo aad u faa'iido badan Desktop (GUI) iyo Terminal (CLI) codsiyada loo sameeyay kuwa adeegsada dareenka Dunida DeFi, gaar ahaan kuwa maalinba maalinta ka dambaysa ganacsade (way ganacsadaan) kala duwan Criptomonedas ganacsi ahaan; waa mid aad u danayn iyo faa iidooyin leh, dhamaanteed «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» iyo wax ku biirinta baahinta ee nidaamka deegaanka ee cajiibka ah, weyn iyo sii kordhaya ee «GNU/Linux».
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Suuqyada iyo Cointop: 2 GUI iyo barnaamijyada CLI si loola socdo Cryptocurrencies
Hantidhowrka ayaa loo dhameystiray dhammaan balastarrada ay soo gudbisay Jaamacadda Minnesota
Biilka New York wuxuu ujeedkiisu yahay inuu si ku meel gaar ah u joojiyo macdanta dhirta dhirta